ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုမှာ iPhone Photo Apps ရှိရမယ် Martech Zone
ထိပ်ဆုံး ၁၀ ခုမှာ iPhone Photo Apps ရှိရမယ်
စနေနေ့, နိုဝင်ဘာလ 17, 2012 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ပုံဆရာကောင်းမဟုတ်သောကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာတစ်လုံးကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး ခေါင်းကိုဖြတ်သန်းနေသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်၏ iPhone နှင့်အကြိုက်ဆုံး application အချို့ကို အသုံးပြု၍ အနည်းငယ်လိမ်ပြောသည်။ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နေသည့်အလုပ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သွားသည့်နေရာများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်သောဘဝသို့ပုံတစ်ပုံကိုတိုက်ရိုက်ပံ့ပိုးပေးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်နောက်လိုက်များနှစ်သက်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှုအဆင့်ကိုတိုးစေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်အတွက်ဓာတ်ပုံသည်အဓိကဖြစ်သည်။ ငါကုမ္ပဏီတိုင်းကသူတို့ရဲ့န်ထမ်းဝေစုရှိသည်ဖို့အားပေးချင်ပါတယ်! ဤတွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးအိုင်ဖုန်းအက်ပလီကေးရှင်းများပြိုပျက်သည်။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်သိသည်မှာကင်မရာသည် iOS ပါ ၀ င်သော်လည်းမြင်ကွင်းကျယ်ပုံရိပ်ယူရန်ရွေးချယ်စရာမှာအံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လိုပါကသင်၏ကင်မရာဖွင့်သောအခါ options ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီဟာကကျွန်တော်မကြာသေးခင်ကသွားခဲ့တဲ့ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံပါ။
အခြားမည်သည့် application application မျှပုံရိပ်များကိုလူမှုရေးဝေမျှရန်လွယ်ကူစေသည်။ အခြားဓာတ်ပုံများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုရှာဖွေခြင်းထက် Instagram မှ Twitter, Facebook နှင့် Foursquare သို့တိုက်ရိုက်ပို့ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသည့် filter နှင့် blur များကို အသုံးချ၍ သင်အားလိုလားသူတစ် ဦး ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အခြေခံကင်မရာက၎င်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာမရှိသည့်ထူးခြားချက်အချို့ရှိပါသည်။ ဥပမာ timer တစ်ခုထည့်ခြင်းနှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း။ Camera + တွင်သင်ရိုက်ကူးသည့်ဓါတ်ပုံများကိုစီစစ်ခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားခြင်းများကိုကူညီနိုင်သည့်အပြင်မွမ်းမံနိုင်သည့်စွမ်းရည်အချို့ရှိသည်။ ဒါဟာအပျော်တမ်းအတွက်တည်ဆောက်ထားတဲ့လိုလားတဲ့ toolset တစ်ခုပါ။
Grid Lens သည်ဓာတ်ပုံများကိုစုဆောင်းပြီးပုံတစ်ပုံတည်းနှင့်အတူတကွထားရန်ခွင့်ပြုသည်။ layout ကိုရွေးချယ်ပြီးစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိူင်သည်။ ထို့နောက်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုအစက်အပြောက်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြီးဆုံးပြီးနောက်ထုတ်ကုန်ကိုသိမ်းဆည်းပါ၊ ဝေမျှပါသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ ဤသည်အနည်းငယ်စုဆောင်းခြင်းရိုးရှင်းလွယ်ကူစေသည်!
ColorSplash သည်သင်ရိုက်ထားသောဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှအရောင်ကိုဖယ်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤအက်ပ်သည်သုံးစွဲရလွယ်ကူသည်။ ဓာတ်ပုံကိုချဲ့ပြီးသင်အရောင်ကိုသုတ်ပစ်လိုသည့်လက်ချောင်းကိုဆွဲယူပါ။ အချောရုပ်ပုံကတကယ်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းတယ် - ဒါကငါ့သားနဲ့သူ့ရည်းစားကခုန်တာပါ။
စာတန်းထိုးတောင်းခံတဲ့ဓာတ်ပုံရှိလား။ ၎င်းသည် Over for …တကယ့်ကိုအေးမြသောလမ်းညွှန်ဘီးကိုပေးစွမ်းခြင်းဖြင့်သင့်ဓာတ်ပုံအားမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဖန်စီစာတန်းထိုးထည့်နိုင်သည်။
Snapseed သည်သင်၏ပုံအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်စစ်ထုတ်ကိရိယာများနှင့်စံတည်းဖြတ်ရေးကိရိယာအချို့ကိုပေးသည်။ အကန့်အသတ်ထိန်းချုပ်မှုများသည်အထင်ကြီးစရာ ဖြစ်၍ အသုံးဝင်မှုရှိခြင်းသည်အလွန်ဆန်းသစ်သည်။
Blender သည်သူပြောသည့်အတိုင်းပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံရိပ်များစွာကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီမှာချီကာဂိုရောစပ်ထားတယ်…မြို့ထဲကိုကားမောင်းသွားပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါ။
ကအကြံပြုသည် နတ်ဖင်လန်Aviary မှာ iOS application ရှိတယ်ဆိုတာတောင်မှကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ထူးဆန်းတာကကျွန်ုပ်သည် web ဗားရှင်းထက် iPhone application ကိုပိုမိုနှစ်သက်ခံစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ Aviary တွင်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာရှိသည် စတစ်ကာများ သင်၏ပုံကို callouts (သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းမွှေးများ) ထည့်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်။
iPhone အတွက် Photoshop Express
Nat နှင့်အခြား Photoshop Express မှပေးသောအခြားအကြံပြုချက်။ Photoshop Express ဖြင့်သင်အောင်မြင်နိုင်သည့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တည်းဖြတ်မှုကိုအထက်ဖော်ပြပါအခြားကိရိယာများတွင်တွေ့နိုင်သည်၊ သို့သော်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ အနည်းငယ်ပိုသော filter များ၊ frames များနှင့် effect များကိုထည့်ပါ။ သင်၌အလွန်ကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သည့်အစုံရှိပါသည်။
Tags: Blenderကင်မရာ +အရောင်ဇယားကွက်မှန်ဘီလူးimage ကိုပုံရိပ်တွေiphoneကျော်လွန်ဓာတ်ပုံများရုပ်ပုံsnapseed
လူမှုမီဒီယာ၏ 36 စည်းမျဉ်းများ
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 1:56 နာရီ
လေယဉ်။ အားလုံးက meme ထုတ်လုပ်သူနဲ့ ပတ်သက်တယ်။ ၎င်းတွင် blur နှင့် retouching tools များပါရှိသော်လည်း ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သော တကယ့်အေးမြသောအချက်မှာ ၎င်းတွင်စုစည်းမှုပါရှိသည်။ Facebook၊ twitter၊ Flicker… တစ်ချိန်တည်းတွင်။ Instagram လောက်တော့ မိုက်တယ်။
အခု ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာတွေမှာ ကြော်ငြာထားတဲ့ google plus WINS ကို အရင်ဆုံး စုစည်းပါရစေ။
နိုဝင်ဘာလ 17 ရက် 2012 ခုနှစ် ညနေ 2:09 နာရီ
ချိုမြိန်! သူတို့မှာ မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းရှိမှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။
18:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 3, 10
ဟုတ်တယ် တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ အခပေးအက်ပ်ဖြစ်သော်လည်း meme ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စာသားထည့်သွင်းခြင်းအတွက် ၎င်းသည် အဖိုးမဖြတ်နိုင်ပါ။ Photoshop Express နဲ့ InstaPicFrame တို့လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ Aviary သည် အကောင်းဆုံး မျှဝေမှု ရှိခဲ့သည်။
29:2012 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 10, 40 တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ iPhoneography အက်ပ်အသစ်၊ Hipsta Hipster Cam ကို ကြည့်ရှုပါ။ http://www.hipster-camera.com ကျွန်ုပ်တို့တွင် အကန့်အသတ်မရှိ မူရင်း filter များပါရှိခြင်းဖြင့် ပုံမှန် iphone photography app တွင် အတော်လေးမိုက်သော လှည့်ကွက်တစ်ခုရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ထင်ပါသည်။
မတ်လ 11, 2013 မှာ 1: 16 pm တွင်
စာရေးသူက 'Zitrr Camera' ထည့်ဖို့ မေ့သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ camera+ ဒါမှမဟုတ် Instagram ထက်တော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်... အချို့သော app တွေက သိပ်မကောင်းဘူး :/
ဧပြီ 4, 2013 မှာ 2: 49 AM
ကောင်းသောအက်ပ်များ။ ဒါပေမယ့် Auto Colorize Pro ကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဇန်နဝါရီ 2, 2014 မှာ 3: 05 AM
Instafusion ထိပ်တန်း iPad ဓာတ်ပုံ-တည်းဖြတ်ခြင်းအက်ပ်များ !!! Instafusion သည် iPhone တွင် ဓာတ်ပုံများကို တည်းဖြတ်ရန် အကောင်းဆုံး Photo Editing Apps နှင့် Awesome Apps!!!
26:2014 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 6, 46
ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးကတော့ instafusion app ပါ။
ဧပြီ 6, 2015 မှာ 8: 50 pm တွင်
Sweet Pix ကို မြင်ဖူးသလား။ တကယ်မိုက်တဲ့ စိတ်ကူးပါ။